China Malaysia- Ọrụ SIRIM na Ule | MCM
Maka nchekwa nke mmadụ na ihe onwunwe, gọọmentị Malaysia na-ehiwe atụmatụ asambodo ngwaahịa ma na-etinye onyunyo na ngwa elektrọnik, ozi & igwe okwu na ihe owuwu. Enwere ike ibupụ ngwaahịa na Malaysia naanị mgbe ịnweta akwụkwọ asambodo ngwaahịa na akara.
SIRIM QAS, onye enyemaka nke ụlọ ọrụ Malaysian Institute of Industry Standards, bụ naanị ụlọ ọrụ asambodo enyere ndị ọrụ nchịkwa mba Malaysia (KDPNHEP, SKMM, wdg).
Asambodo batrị nke abụọ bụ nke KDPNHEP (Malaysian Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs) họpụtara dịka naanị ikike asambodo. Ugbu a, ndị nrụpụta, ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị ahịa nwere ike itinye akwụkwọ maka asambodo na SIRIM QAS ma tinye maka ule na asambodo nke batrị nke abụọ n'okpuru usoro asambodo enyere ikike.
IRSIRIM Asambodo- Batrị Secondary
Secondary batrị ugbu a n'okpuru afọ ofufo asambodo ma ọ na-aga na-na akporo nke amanyere bụ iwu nke asambodo anya. Kpọmkwem ụbọchị iwu kwadoro n'okpuru ndị ọrụ ọkwa ọkwa ndị Malaysian. SIRIM QAS amalitela ịnabata arịrịọ asambodo.
Secondary batrị asambodo Standard: MS IEC 62133: 2017 ma ọ bụ IEC 62133: 2012
Haziri ezigbo SIRIM QAS site na ịgbanye ọwa ozi na ọrụ mgbanwe ozi nke kenyere onye ọkachamara ka ọ rụọ ọrụ na MCM naanị yana ịkekọrịta ozi kachasị ọhụrụ nke mpaghara a.
SIRIM QAS na-amata data nnwale MCM ka enwere ike nwalee ihe nlele na MCM kama ịbuga na Malaysia.
● Iji nye ọrụ nkwụsịtụ maka asambodo batrị, ihe nkwụnye na ekwentị mkpanaaka Malaysian.
● 10 afọ ahụmahụ na batrị ụlọ ọrụ na ndị dị ike oru otu nwere ike inye ahịa na ọkachamara mba asambodo ọrụ ngwugwu.
Nke gara aga: Vietnam- MIC
Asambodo Malaysia Sirim
Malaysia Sirim Ahịa Asambodo
Usoro Usoro Sirim nke Malaysia
Ọrụ Asambodo Malaysia Sirim
Malaysia Sirim Lead Oge
Okwu Sirim Malaysia
Nkwupụta Malaysia Sirim
Malaysia Sirim Akwụkwọ ikike
Malaysia Sirim Ule Ihe
Testkpụrụ Ule nke Malaysia Sirim
Malaysia Sirim Ule Ule
Malaysia Sirim Ule Ọrụ
Malaysia Sirim Testing Oge